Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seychelles dia mandray ny sidina charter avy any Tianjin, Sina
Ireo mpitsidika tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenenan'i Seychelles ny Alarobia 27 septambra 2017 dia noraisina an-tanan-kafaliana manokana satria Andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany izao.
Notolorana fanomezana isan-karazany ireo mpitsidika, mampiseho ny lafiny sasany amin'ny nosy Seychelles, avy am-pelatanan'ny tompon'andraikitra misahana ny fampahalalana momba ny fizahan-tany Seychelles, raha vantany vao niditra ny efitrano fandraisam-bahiny izy ireo. Nisy tropy koltoraly teo an-toerana koa nanatrika dihy nentim-paharazana an'ny firenena nosy.
Sidina miisa 10 no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Seychelles omaly ary ny vahiny avy amin'ireo sidina tsirairay ireo dia noarahabaina tamina ambiansy mitovy.
Florent sy Alexia Château mpivady vao avy any Frantsa izay mitsidika an'i Seychelles voalohany ary faly rehefa noraisina tamina fitsenana manokana.
"Mahafinaritra tokoa ary manantena ny hahita ireo faritra mahafinaritra sy torapasika mahafinaritra izahay ary handeha snorkeling mandritra ny fialantsasatray," hoy Andriamatoa sy Ramatoa Château.
Ho an'i Rene Zimmerhauu sy i Doris Fischer avy any Suisse dia fahatsapana manokana ihany koa ny niarahaba azy ireo tamina fandraisana manokana, izay nofaritan'izy ireo fa tena nafana, tamin'ny diany faha-14 tany Seychelles.
Vao mainka niavaka kokoa ny fandraisana azy ireo ho an'ireo mpitsidika sinoa 154 izay tonga tao Seychelles tamin'ny sidina voalohany tamin'ny sidina telo natokana ho an'ny kaompania nasionaly, Air Seychelles, avy any Tianjin, Sina.
Ny sidina fiaramanidina dia manaraka ny fifanarahana nosoniavin'ny Air Seychelles tamina mpandraharaha mpizahatany sinoa, Caissa, ary nomena fotoana hifanandrinana amin'ny fetim-pirenena Golden Week, vanim-potoana fitsangatsanganana iray bevohoka any Sina. Izy io koa dia mankasitraka ireo sidina natao farany, izay niasan'ny Air Seychelles teo anelanelan'ny Seychelles sy Chengdu nandritra ny volana Jolay sy Aogositra 2017.
Ny andiam-panidinana sidina vaovao dia ampahany amin'ny manampahefana misahana ny fizahan-tany sy ny ezaky ny Air Seychelles hampitombo ny isan'ny mpitsidika avy any Shina, izay heverina ho tsena lehibe mivoatra ho an'ny nosy. Air Seychelles dia hiasa sidina roa hafa avy any Tianjin amin'ny 4 sy 11 Oktobra.
Andro maneran-tany ho an'ny fizahantany izay ankalazaina isan-taona amin'ny 27 septambra dia amin'ity taona ity izay natao tamin'ny lohahevitra Sustainable fizahan-tany - Fitaovana iray ho an'ny fampandrosoana.
Any Seychelles, herinandro io dia ankalazaina ary ny Alarobia ny iray amin'ireo hetsika lehibe dia ny andro misokatra ao amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany, manome ny olon-drehetra, ary ny olona maniry ny hiditra amin'ny orinasan'ny fizahantany ny fotoana hidirana sy hahafantarana bebe kokoa ny anjara asany sy ny asany.
Ny talen'ny fampandrosoana ny fizahantany ho an'ny fizahantany ao amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany, Gerard Port-Louis dia nilaza hoe: "Na dia tsy dia avo loatra aza ny taham-pahavitrihana, dia faly izahay nifanerasera tamin'izay tonga tao ary nanatrika fotoana iray izahay mba hanatrehana ny fanontaniany. . Sambany nanokatra ny varavarantsika io ary manantena ny hahavita azy io indray amin'ny ho avy. ”
Hetsika hanamarihana ny Herinandron'ny fizahantany amin'ity taona ity dia hitohy hatramin'ny 3 Oktobra ary toy ny fanao dia ny Ball Tourisme isan-taona no iray amin'ireo hetsika lehibe. Ny hetsika dia hatao amin'ny asabotsy ao amin'ny hotely Eden Bleu.